Laura Muir anokwikwidza kukunda 1500m kukunda paAnini Games | 1xbet
Chiitiko chisina kujairika, mukuti icho chinotarisa kumashure uye chakakanda kumashure munguva, iyo Muller Anniumph Games iri chikamu chegumbo reLondon 2012 uye zvakare yakakosha yekumira munzira munzira kuenda kuWorld Championship kuDoha munaGunyana. Ngozi ndeyekuti chiitiko pachacho chinoshaya mhedzisiro asi, seyakanyanya nguva uye mwaka weyakagadziriswa wakagadziridzwa mukati mezuva, haina kunzwa saizvozvo mukati meLondon Stadium.Dina Asher-Smith akasimbiswa nehunyengeri seyakasangana nyika muLondon | Paul MacInnes Verenga zvimwe
Mutungamiriri wechiitiko kubva kune imwe nzvimbo yekuona kweBritain aive Muir, akazvizivisa pachimiro chepasi rose pachiitiko ichi makore matatu apfuura apo akaputsa rekodhi yeDame Kelly Holmes muBritain mune yegumi nemashanu yevakadzi.Iye zvino 26 uye mumakwikwi eEuropean, Muir anga achitarisira kukwikwidza nemakwikwi eOlympic, Tumendi Kipyegon asi muKenya akabva abva kunonoka aine muitiro unowedzera.
Mukusavapo kwake Muir akazvitora kuti atore nhangemutange, achigara kuseri kwecomputer kubva kubvapo akabata chinzvimbo chake asingatomboita senge achizvishandisa nesimba. Kupedzisa kwake kwaive kuchinakidza kupfuura kutanga kwake, zvisinei, Muir sezvaakafukidza yekupedzisira mamita mazana matatu nemakumi mana nemapfumbamwe nemasekondi uye kupepera munda kuti uwine nehurefu hwakawanda mumamirioni matatu nemakumi matatu neshanu neshanu. asi zvakange zvisiri, ”Muir akadaro mushure. “Handina kuziva kuti ndakamhanya papena-pechipiri pekupedzisira uye ndakafara kwazvo. Vasikana vacho vakasimba uye ndinoziva kuti mukana wangu uri mukutamba ikoko, saka ndakangogaramo ndichiyedza kuti zvive nyore.Izvo zvaive nezvekukunda nhasi uye ndazozviita.
“London inokurumidza kuridza track uye inogara iri mamiriro ekunze. Mamiriro acho anowanzo kunge akanaka – yaive mhepo diki nhasi asi vibe rese renzvimbo rakanyatsosarudzika uye rinoita kuti vatambi vasimudze mutambo wavo. Chinangwa changu ikozvino kukunda menduru muDoha. ” Facebook Twitter Pinterest Zharnel Hughes mushure mekupedzisira kwe100m pazuva rekutanga reMitambo yeVanhu. Akapedza wechipiri kumashure kwaAkani Simbine. Mufananidzo: Briteni Athletics kuburikidza neFetty Mifananidzo
Tarisiro yakatenderedza 100m sprinter Hughes uyo, saMuir, akakunda goridhe muBerlin uye zhizha rapfuura akaisawo yakanakisa ye9.91sec. Kunakidzwa kwakakomberedza wemakore makumi maviri nemasere ekukura kwakawedzera pazuva raakarova mhepo kuburikidza nekupisa kwake mumwaka wakanaka kwazvo 9.96.Iwo waive mujaho uyo wairatidzawo mumwe wake Briton James Ellington, uyo aive achiita wekutanga kukwikwidza kuratidzika kubva paakakomba mudhudhudhu mutsaona muna 2017.
Yokupedzisira yakavimbisa zvimwe Hughes paakakwira munda uyo waisangobatanidza weCanada weOlimpiki menduru yegoridhe Andre De Grasse asi Jamaican lean Yohan Blake uye mumiririri wenguvaano weAfrica, Akani Simbine. Hughes aigona kupedzisa chechipiri chete, zvakadaro, apo weSouth Africa yakaenderera mberi kuhwina muna 9.93.Hughes akabheja nguva yake kubva pamachira apo aipfuura nekwaBlake achipedza mufananidzo asi zvakamhanya zvisingaite uye zvakaita kuti ndione nezve anticlimax. nguva yangu yekupinza, ”akadaro Hughes, uyo akakwikwidza kane muna 2019 vhiki ino isati yapera. “Ndiri kufara kuwana mwaka wakanaka uye ndafara nemumhanzi wairidzwa mumhanyi usati watanga, zvakandishungurudza. Ndichitarisira kumberi, ndinovimba nemurairidzi wangu uye ndinovimba neniwo. Kana ndichienda kumberi ndinowedzera kuvimba. ”
Hughes chizvarwa chekuAnguilla, imwe yeBritish Overseas Territories, vakasarudza kumiririra Britain.Dobbin, zvakadaro, akaberekerwa muDoncaster asi anokwikwidza kuScotland uye akaputsa chinyorwa cheScotland achipedza chechitatu mumakumi maviri evakadzi.
NaDina Asher-Smith vakagara mujaho uyu vachifarira 100m musi weSvondo, uno yaive chiitiko chinodzorwa neJamaican Elaine Thompson. Iyo mbiri yeOlympor mumakwikwi akakunda nyore muna 22.13. Asi Dobbin’s 22,5sec achipedza kuveurwa 0.09sec kubva kwaari zvakanakisa uye akafanirwa akakunda kureururwa kwechaunga. “Ini ndinowanzotanga mwaka zvishoma nezvishoma uye ndanga ndisingatarisiri kuti zvichauya zvakanaka nhasi”, akadaro. “Kunzwa kwakanyanya.” Sign up to The Recap, yedu vhiki yeemail yevagadziri ‘vatora.
Kune imwe nzvimbo kwaive nemitambo yemarita uye kwete yega yega yakabva kuJamaican.Zvingadaro, Danielle Williams pamwe akaunza zvinonakidza kwazvo ivo sevanezhinji sprint vakamhanya 12.32, yechipiri inokurumidza nguva munhoroondo uye yeJamaican rekodhi, mune 100m matambudziko ekupedzisira. Sezvineiwo, iyo yakanyanya kukurumidza kuvepo muchiitiko ichi zvakarekodhwa kuVatambi veMitambo, muna 2016, apo American Kendra Harrison’s 12.2 akatyora rekodhi yaive yakamira makore makumi masere nemasere. Norwei Karsten Warholm, uyo akamhanya akanakisisa zvake, reEuropean rekodhi uye inomhanyisa nguva munyika gore rino aine 47.12 mumatambudziko 400m. Ane makore makumi maviri nematatu ekuzvarwa, aivewo mumwe wevatambi vashoma kuti vasatambe pasi kubudirira kwake mukutarisira kutarisira Doha. “Handizive kana ndichida kuhwina [World Championship]. Ndinozvida pano, “akadaro.